တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA – CAT-4 အထိဖြစ်လာနိုင် | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA – CAT-4 အထိဖြစ်လာနိုင်
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA သည် အင်အားကောင်းသော တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းကြီးအဆင့် CAT-4 သို့
လာမည့် တနင်္လာနေ့ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့ 0300GMT တွင် ရောက်ရှိလာနိုင်ပြီး ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်း၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းသို့လည်း သက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်ကြောင်း JTWC ခန့်မှန်းချက်နှင့် WUND ခန့်မှန်းချက်များတွင် ပုံပါအတိုင်းဖေါ်ပြထားပါသည်။
TSR မှလည်း ဖိလစ်ပိုင် မြောက်ပိုင်းနှင့် ထိုင်ဝမ်ကျွန်းတို့သို့ ပဏာမသတိပေးချက်များ စတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
Storm Alert issued at 30 Sep, 2009 6:00 GMT
Typhoon PARMA is forecast to strike land to the following likelihood(s) at the given lead time(s):
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: PARMA, typhoon, weather.2Comments »
2 Responses to “တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA – CAT-4 အထိဖြစ်လာနိုင်”
Typhoon PARMA current position at time 15:45 Myanmar Time(0915GMT)
970 Miles SE of Manila, bearing 107 degree
KETSANA NEWS – Sep 30, 09 12:21pm
Typhoon Ketsana leftatrail of destruction across Southeast Asia Wednesday, killing at least 49 people in Vietnam and Cambodia and churning towards Laos, officials said.
Tens of thousands of people had fled their homes to escape flooding caused by Ketsana, which had already killed 246 when it struck the Philippines over the weekend asaweaker tropical storm. Related article: Philippines destruction
« တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PARMA ၏ လမ်းကြောင်းခန့်မှန်းချက်များ »